मेरी छ‍ोरीलाई न्याय होला ? :: ABC NEWS
शारदा शर्मा बिहिबार,१ असार २०७४ SS Opinoin 0
उनले फेरि बस्न भनिन।खै किनहो यसरी फिसलिदै र लर्वरिदै जीवनको अग्नि परीक्षा उतिर्ण गर्न म आज पनि लागिरहेकी छु,उनले भन्दै गर्दा म झसंग भए । नबुझे पनि बुझेजस्तै गरें।यति लामो समय सम्म नपुरिएका उनका घाउहरुमा लगाउने मलम म संग पक्कै पनि थिएन ।र पनि सोधें आज अचानक किन यादहरुले सताउन थाले ?? उनले भन्दै गइन यी घाउहरु सुक्न सक्छन तर निको हुन सक्दैनन ।मलाइ अचम्म लाग्यो सुक्दै गए पछित पक्कै पनि निको हुन्छननी त मैले सोधें उनले फेरि भनिन देश र जनताको लागि लडेकाहरु एक ठाउँमा छैनन।हिजो छोरीले भात पकाएर खुवाएकाहरु पनि युद्धमा सहिद बने मेरी निर्दोष छोरी र श्रीमानको हत्या गर्नेहरुले पदक पाए।आज टाउकोको मोल तोक्ने र तोकिनेहरुको एकता बिचित्रको छ । स्वार्थको लागि जे पनि गर्नेहरुले के मेरी छोरी र श्रीमानलाइ न्याय दिन सक्लानरुरुमलाइ सोध्दै गर्दा उनका आखां फेरि एकपटक रसाएका थिए । श्रीमान र छोरीको अत्यासले फेरि पनि उनी कहालिएकी थिइन । सायद उनी भित्रको पीडा कमैले महसुस गर्न सक्छन । उनका सवालहरुको म संग कुनै जवाफनै थिएन । उनले फेरि सोधिन स्थानीय चुनावको के नाटक हो योरुम अलमलिएं। मधेशको नाममा भएको यो अस्वस्थ राजनीतिले के देशको न्याय होला ?? टेलिभिजनको अन्तरवार्तामा जसरी सोधेका उनका सवालहरुले चकित थिएं । सोचें जीवन र जिन्दगीको कठिन कोशेढुङ्गा तर्दै जांदा विश्वविद्यालय सजिलै टप गरेकी छन सानीमायाले ।अचानक फेरि भेट्छुहै भन्दै हतार हतार गाडी चढिन मैले हेरिरहें ।
नेपालभरि र विशेषत दक्षिण एशियामा नै काठमाडौं यस्तो शहर हो जसका बारेमा अनेकखालका किम्वदन्ती र मिथकले भरिभराउ छ । सन्… बुधबार,१० जेठ २०७४